तृणमूल सरकार पीड़ितहरूको चुनावी कर्तव्य - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनतृणमूल सरकार पीड़ितहरूको चुनावी कर्तव्य
तृणमूल सरकार पीड़ितहरूको चुनावी कर्तव्य
April 12, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
हामी सबै तृणमूल सरकारदेखि पीड़ित भएकोले यो तृणमूलको उम्मेद्वारलाई हराउनु हाम्रो परम कर्तव्य बन्दछ। म र मेरो परिवार त यो तृणमूलको उम्मेद्वारलाई हराउन शारीरिक र मानसिक रूपले तयारी छौं – तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ? अहिले मेरो कतिजना साथी भाइहरू विनय-अनित समुहमा बाध्यताले हिँड़्दैछन् – कतिजना तृणमूल पार्टीमा हिँड़्दैछन् तर तिनीहरूलाई तृणमूल सरकारले दिएको केस अझै सकिएको छैन। महिनामा एकपल्ट कोर्ट धाउनै पर्ने बाध्यता छ – तिनीहरूलाई त्यो केस भाजपाले लगाएको हो? बिमल गुरूङले लगाएको हो? पक्कै पनि त्यो केस तिनीहरूलाई तृणमूल सरकार साथै पुलिस प्रशासन मिलेर नै लगाएको हो। यसर्थ आफूलाई केस लगाउने पार्टीको उम्मेद्वारलाई कसैले भोट हाल्छ? यो कुरा बुझेर पनि मेरा ती तृणमूल सरकार पीड़ित साथीहरूले तृणमूलको उम्मेद्वारलाई पटक्कै भोट हाल्दैनन्।
देव खम्बु राई।
मेरो जन्म भारतवर्षको दार्जीलिङ जिल्लामा भएको हो। मेरो पुस्तौं पुस्ता भारतवर्षको नागरिक हुन् – जसको प्रमाण मेरो साखु दिवा (राई भाषामा बाजेको बाउलाई साखु दिवा भन्ने चलन छ।) को नाममा भएको जमिनको पुरानो कागज पत्रले दिँदछ। अहिले त्यो कागजपत्र बाजेको नामबाट सरेर मेरो आप्पा र काकाहरूको नाममा भएको छ। भारतवर्षको स्वतन्त्रता पछि पश्चिम बङ्गालमा धेरै सरकारहरू आए अनि गए – धेरै चुनावहरूमा मतदान गरियो तर अहिलेको तृणमूल सरकारले मेरो भारतवर्षको नागरिक हुने हक खोसेको छ – मेरो भोटरलिस्टबाट नाम काटिदिएको छ।
म अहिलेको तृणमूल सरकारदेखि पीड़ित व्यक्ति हुँ – मेरो परिवार तृणमूल सरकारदेखि पीड़ित परिवार हो। म अनि मेरा साथीहरूलाई विभिन्न झुटा मुद्दाहरूमा फँसाइएको छ – म अनि मेरो साथीहरूको घरमा यो लोकसभा चुनाव अवधि पनि पुलिसद्वारा बारम्बार नोटिसहरू टाँस्ने काम भइरहेको छ।
म अहिले केही गर्ने अवस्थामा नै छुइनँ। म केवल यति मात्र गर्न सक्छु कि मेरो परिवार अनि शाखा – सन्तानलाई तृणमूलमा भोट दिनुहुँदैन भनेर सम्झाउन सक्छु र अहिले म त्यही गर्दैछु।
मेरो हेराइमा दार्जीलिङ पहाड़ तराई अनि डुवर्सको सम्पूर्ण जनता तृणमूल पीड़ित जनता हुन्। 105 दिनको बन्द अवधिमा कहीँ न कहीँ तपाईँहरूलाई पनि यो तृणमूल सरकारले पीड़ा दिएको छ। पुलिस प्रशासनको डरले तपाईंहरूको कुनै न कुनै एक सदस्य त्यो बन्द अवधि घरदेखि बाहिर सुतेको छ – लुकेर बसेको छ।
यही आधारमा पनि तपाईंहरू तृणमूल सरकार पीड़ित व्यक्ति पर्नुभयो – तपाईँको परिवार तृणमूल सरकार पीड़ित परिवार भयो। अहिले कुन मुख लिएर यही तृणमूलको उम्मेद्वार हाम्रो गाउँ घरतिर भोट माग्नु आउँदैछ?
हामी सबै तृणमूल सरकारदेखि पीड़ित भएकोले यो तृणमूलको उम्मेद्वारलाई हराउनु हाम्रो परम कर्तव्य बन्दछ। म र मेरो परिवार त यो तृणमूलको उम्मेद्वारलाई हराउन शारीरिक र मानसिक रूपले तयारी छौं – तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ?
अहिले मेरो कतिजना साथी भाइहरू विनय-अनित समुहमा बाध्यताले हिँड़्दैछन् – कतिजना तृणमूल पार्टीमा हिँड़्दैछन् तर तिनीहरूलाई तृणमूल सरकारले दिएको केस अझै सकिएको छैन।
महिनामा एकपल्ट कोर्ट धाउनै पर्ने बाध्यता छ – तिनीहरूलाई त्यो केस भाजपाले लगाएको हो? बिमल गुरूङले लगाएको हो? पक्कै पनि त्यो केस तिनीहरूलाई तृणमूल सरकार साथै पुलिस प्रशासन मिलेर नै लगाएको हो।
यसर्थ आफूलाई केस लगाउने पार्टीको उम्मेद्वारलाई कसैले भोट हाल्छ? यो कुरा बुझेर पनि मेरा ती तृणमूल सरकार पीड़ित साथीहरूले तृणमूलको उम्मेद्वारलाई पटक्कै भोट हाल्दैनन्।
हिजाज केही समय अघिसम्म जेलमा बन्दी भएर बसेका हाम्रो साथीहरू पनि तृणमूल खेमामा हिँड़ेको देँखे – विनय अनितको पछिपछि कुदेको देँखे। तिनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ – तिनीहरूलाई जेल बन्दी बनाउने यही तृणमूल सरकार हो – यही तृणमूल सरकारको पुलिस प्रशासन हो। ती साथीहरू जेल बन्दी हुँदा सहेको शारीरिक र मानसिक पीड़ाहरू तिनीहरूले यति चाँड़ै भुलेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
तिनीहरूको परिवारले बगाएका आँशुहरू यति चाँड़ै ओभाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसैले तिनीहरूको मतदान तृणमूल सरकार र तृणमूल सरकारको प्रशासनलाई एउटा शिक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त छु।
मैले अघि नै भनिहालें – तपाईँ हामी सबैजना कहीँ न कहीँ – कत्तै न कत्तै तृणमूल सरकारदेखि पीड़ित हौं – तपाईँको र मेरो परिवार कहीँ न कहीँ – कत्तै न कत्तैबाट तृणमूल सरकारदेखि पीड़ित परिवार हो। अलिकति कम बेसी होला तर पीड़ित त पक्कै सबै पीड़ित नै हो।
यसैले तृणमूललाई उचित शिक्षा दिनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य बन्दछ जसको निम्ति तृणमूलको उम्मेद्वारलाई हराउनु हाम्रो लक्ष्य राख्नुपर्छ चाहे त्यो उम्मेद्वार हामी कसैको आफन्त नै किन नहोस् – हामी कसैको जात भाई नै किन नहोस् – चाहे त्यो उम्मेद्वार भूमिपुत्र नै किन नहोस्।
चुनाउको ठिकअघि विशालले गरे दार्जीलिङको राजनैतिक ‘पोस्टमोर्टम’
अमरसिंह राईको पार्टीको घोषणा पत्रमा छैन बनबासीको मुद्दा : लीला गुरुङले भने-यो विनय तामाङहरूको बनबासी उच्छेद गर्ने योजना हो
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (33,572)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (29,395)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (22,005)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (21,212)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (19,276)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (19,207)